Xingtai Huimao Trading Co., Ltd, waa shirkad soosaara aqoon iyo soo-saare qaybaha dayactirka gawaarida. Warshaddeenu waxay ku taalaa Jvlu Industrial Zone, Xingtai City, Gobolka Hebei, waxay diirada saareysaa qaybaha wax soo saarka ee qaybaha wax lagu xirto ee caag ah iyo saliidaha baabuurta, sida shaabada saliida, siddooyin O, gaskado, duurka, iwm
Our warshad daboolayaa aag ka badan 1300 mitir murabac ah oo uu leeyahay waayo-aragnimo wax soo saarka hodanka ah oo duurka ku ah shaabadood caag in ka badan 20 sano tan iyo markii la aasaasay. Shirkaddu waxay leedahay aqoon isweydaarsi cajiin ah, aqoon isweydaarsi baaruud ah, aqoon isweydaarsi dib u habeyn ah, aqoon isweydaarsi baako, aqoon isweydaarsi dib u hagaajin, aqoon isweydaarsi baako
Shirkadeena waxay leedahay in kabadan 20000 nooc oo wasakhahaasi ah iyo keydka alaabada ceyriinka ee waaweyn, oo leh khibrad ku filan oo wax looga qabto shaabadaha warbaahinta kaladuwan iyo xaaladaha shaqo ee kaladuwan.
Waxaan nahay soo saaraha OEM, horumarinta qalabka gawaarida gawaarida ay bixiyaan macaamiisha. waxaan ku siin karnaa shuruudo farsamo iyo taageero farsamo baahida macaamiisha.
Qalabka dayactirka otomaatiga ah ee adeegga hal-joogsi, Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, ha ka waaban inaad nala soo xiriirto
Khatimidii Silicone Rubber, Qalabka Gawaarida, Qeybinta Qeybinta, Saliida Saliida, Xakameynta Gacan ku Qaadista, Qaybaha dayactirka,